Food – Page4– Healthy Life Journal
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကြက်သားစားတဲ့အခါ အများစုက ရင်ပုံသားကို အကြိုက်ဆုံးလို့ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ကြက်သားမှာ ကြက်ခြေထောက်ကို တွယ်ဆက်တစ်သျှူးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအကျိုး ကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်။ ကြက်ခြေထောက်စားရင် ကော်လာဂျင်ဓာတ်ရရှိစေပါတယ်။ ကော်လာဂျင်ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အိုမင်းမှုကိုဟန့်တားပေးတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံပြောရရင် ကြက်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်၊ ကြက်ခြေထောက်ပြုတ်သုပ်...
Dr.Oz အနှစ်သက်ဆုံး စူပါအစားအစာများ
– စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) Dr.Oz ဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ဦးပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ စားသောက်စရာတွေ ပေါများနေပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးအာနိသင်ပေးနိုင်မယ့် စူပါအစားအစာတွေအကြောင်းကို Dr.Oz က yahoo.com မှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားပါတယ်။ (၁) ပဲနီလေး...
ခရီးပန်းပြီး အစားစားချင်စိတ်မရှိ . . .
မေး. ကျွန်မ ခရီးသွားတိုင်း ခရီးပန်းပြီး အစာစားလို့ မဝင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အစာစားလို့ မဝင်တော့ ပိုပင်ပန်းတယ်။ အလုပ်ကလည်း ခရီးခဏခဏသွားရတော့ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ TTMoe (FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ....
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အစာစားတိုင်း သွားကြားညပ်တာက သွားအနေအထားကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်သလို အသက်ကြီးလာလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွားကြားညပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ အမျှင်ပါတဲ့အစားအစာကို စားတာရယ်၊ သွားက မကျဲတကျဲအနေအထားဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့် သွားကြားညပ်ရတာပါ။ သွားကြားညပ်ခြင်း ကင်းစေရန် စားထားတဲ့ အစာတွေက သွားထဲမှာ ညပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့...
သားသမီးရရှိအောင်အမြဲကျန်းမာလန်းဆန်းနေစေဖို့ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘာတွေစားသင့်သလဲ …
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်နေ့တာလုံး အစာတွေကို အချိန်ကိုက်စားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝနရီဟန်ချက်ညီပြီး စွမ်းအင် အပြည့်ရှိကာ စိတ်ခံစားချက် ကောင်းမွန်နေပါလိမ့်မယ်။ (၁) ပေါင်ချိန်ကြည့်ပါ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလွန်းတာ ၊ များလွန်းတာက အမျိုးသားသုက်ပိုးအပေါ်မကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်များလွန်း၊နည်းလွန်းတာက အမျိုးသားရဲ့ လိင်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်...
– ဇွန် ခရမ်းသီးကို ကျွန်မတို့တွေ စားလေ့ရှိပေမယ့် ခရမ်းသီးမှာပါတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့ တိတိကျကျ မသိကြပါဘူး။ တချို့ဆိုရင် ခရမ်းသီးမှာ ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်မှ ပါဝင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့တောင် အထင်မှားနေတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ခရမ်းသီးမှာပါတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ခရမ်းသီးမှာ မရှိမဖြစ် ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုဖြစ်တဲ့...
ရေပန်းစားလာတဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်သလဲ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အခုခေတ်အခါမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် (Antioxidant)ဆိုတာ ခေတ်စားလာတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တချို့လူတွေက ဒီအင်တီအောက်ဆီးဒင့်ရအောင် ဘယ်လို ရယူရမလဲဆိုတာ မသိဘဲ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အိုမင်းတာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အဆစ်အမျက်ရောင်ရောဂါ စတာတွေကို ကာကွယ်ရာမှာ...
၀မ်းချုပ်တတ်သူတို့အတွက် ဝမ်းနုတ်ဆေးအစွမ်းရှိ သဘာဝအစာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါ နေလို့ထိုင်လို့ မအီမသာဖြစ်စေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တတ်သူတွေအနေနဲ့ ဝမ်းနုတ်ဆေး အစွမ်းရှိတဲ့ သဘာဝအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ် ရှားစောင်းလက်ပပ်ထဲမှာပါတဲ့ အန်သရာကွီနုန်းက အူလမ်းကြောင်းမှာ ရေဓာတ်ပမာဏများစေပြီး ဝမ်းနုတ်ဆေးအစွမ်းရှိပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်း အချွဲတွေကို ကင်းစင်စေပြီး...
ငွေစင်ကြယ်ယံ အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွား တွေက လူငယ်လူရွယ်တွေလို စားချင်တိုင်းစားလို့ မရတော့ပါဘူး။ အသက်ကြီးသူတွေ ကျန်းမာသက်ရှည်စေဖို့ အကောင်းဆုံးအစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်ကျွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီနည်းနည်း၊ ပရိုတင်းများများ သင့်အိမ်က ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေ ကျန်းမာဖို့အတွက် မြေထဲပင်လယ်ဒေသ အစာကျွေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသအစာဆိုတာ...